फेरिएको रत्नपार्क ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
फेरिएको रत्नपार्क !
चटकेले चटक देखाउने ठाँउ । फुटपाथे पसलेहरुले मकै, बदाम , खरबुजा, कुल्फी र आइसक्रिम बेच्ने ठाउँ । सडक बालबालिकाहरु खेल्ने ठाउँ । जताततै फोहोर र दुर्गन्ध । यौन धन्दाका लागि समेत बार्गेनिङ हुने स्थल । लागुपदार्थ सेवन गर्नेदेखि गैरकानुनी धन्दाहरु हुने स्थान । यस्तै यस्तै नकारात्मक परिचय बोकेको रत्नपार्क अब पूरै बदलिएको छ । अब रत्नपार्क सुन्दर, हरियाली र मन बहलाउने स्थलमा रुपान्तरण भइसकेको छ ।
आधुनिक रत्नपार्क अब पहिलेजस्तो छैन । रत्नपार्क शान्त हरियाली र फुल बगैंचाले सजिएको छ । पार्क संचालनलाई व्यवस्थित बनाउन टिकटको व्यवस्था गरिएको छ भने महानगरले १९ जना कर्मचारी खटाएको छ ।
४२ रोपनी जग्गामा फैलिएको रत्नपार्कभित्र हरियाली वातावरण संगै अग्रभागको प्रवेशद्धार नजिकै शोभापोखरी रहेको छ भने दक्षिण तर्फ दुई वटा त्रिकोणात्मक पोखरीहरु रहेका छन् । बालबालीकाको मनोरञ्जनका लागि ६ वटा पिङ्ग र २ वटा चिप्लेटी रहेका छन् । पूर्वी भागमा भने गमलाहरु राखिएका छन् । त्यस्तै शौचालय, सुरक्षा गार्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
रत्नपार्कको निर्माण कार्य बि.स २०१८ सालमा तत्कालीन महारानी रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहको ईच्छा अनुसार सुरु गरिएको हो । यसको निर्माण सम्पन्न भने २०२१ सालमा भएको थियो । पछि २०५८ साल जेठ ५ गते रत्नपार्क महानगरको मातहतमा आएपछि २०६३ साल कार्तिक १ गते देखि महानगरकै वातावरण विभागले यसको संचालन तथा समबद्र्धनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दे आएको छ ।
रत्नपार्क सशुल्क खुल्ला भएपछि २५ रुपैया प्रवेश तोकिएको छ भने बिद्यार्थीका लागि १५ रुपैयामा प्रवेश गर्न दिईने छ । यसबाट बार्षिक ४५ लाख रुपैया आम्दानी गर्ने महानगरको लक्ष्य छ । बालबालीका जेष्ठनागरिकहरुका लागि भने प्रवेश निशुल्क हुनेछ । हप्ताको सातै दिन गर्मी समयमा बिहान ८ बजे देखि साझ ६ बजे सम्म र जाडोको समयमा बिहान ८ बजे देखि साझ ५ बजे सम्म रत्नपार्क खुल्ला रहने छ ।
फोटो : निश्चल / किशोर